မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Cone ချည်ခင်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများတရုတ်နိုင်ငံတွင်စက်စက်ရုံအကွေ့အကောက်များသော - တရုတ်အမြင့်မြန်နှုန်း Cone ချည်ခင်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများတရုတ်ပေးသွင်းအတွက်စက်စက်ရုံအကွေ့အကောက်များသော,စက်ရုံ -FEIHU
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Cone ချည်ခင်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများတရုတ်နိုင်ငံတွင်စက်စက်ရုံအကွေ့အကောက်များသော
winder စက်ချည်ခင်ကန်တော့ချွန်အကွေ့အကောက်များသောစက်ဇာထိုးဘို့ကောင်းသောကြိုးကန်တော့ချွန်ပုံသဏ္ဍာန်လေအသုံးပြုသည် Cone မှ Hanks,warping, ယက်လုပ်ခြင်း, ဆေးဆိုး,အရောင်ချွတ်,စသည်တို့ကို. ဒါဟာဝါဂွမ်းချည်အဘို့သင့်လျော်သည်,သိုးမွှေးကြိုး,polyester ကြိုး,စက်အကွေ့အကောက်များသော etc.CNC လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone လဲမှို့နိုင်လွန်သိုးမွှေး.
ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: လိုင်းအမြန်နှုန်းကိုဖြတ်ပြီး; တစ်ဦးကတစ်ဦး -off ပုံစံ; ပင်တင်းမာမှု; ဖွဲ့စည်းလှပသော
လွန်ခဲ့သော : FHTDTK-တစ်ဦးကလူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone ဓာတု Fiber ချည်ခင် Winder စက်
နောက်တစ်ခု : မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း CNC Bobbin အကွေ့အကောက်များသောစက်